Baro Koorsooyinka Cusub, Waxna Aqri | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 6, 2016
Waxaa haboon inaad barato wax walbo oo aad isleedahay waxay ku cusub yihiin nafsadaada. Barashada koorsooyin cusub iyo waxyaabaha aqoontaada kobcinaya waxay kaa caawinaysaa inaad waqtiga ka faa’idaysato siddoo kalle waxaad ka qayb geli kartaa siminaaro iyo kulamo aqooneed si aad wax uga siyaadsato ama aad u noqoto qof saqaafad wanaagsan leh.
Marwalbo oo aad barato wax cusub waxay u wanaagsan tahay nafsadaada wali waxaad noqonaysaa qof horey u socda.
Ogaaw qofka wuxuu nolosha dhabta ah fahmaa markuu kororsado aqqoon ku filan, inkastoo aqqoonta aanan dhammaanin balse hadana waxaa loo baahan yahay in qofka nafsadiisa ka dhigo mid horey u socoto. Waxaa jiro siyaabooyin badan uu qofka bini’aadamka uu ku horumarini karo nafsadiisa. Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa keenay in shaqsiyaadka qaar ay noqdaan kuwa horumaro kuwa kalena ay u noqdaan kuwa nolosha ka dhacay inta badan?
Waxaanu marqaati ka nahay inaad in badan isweydiiysay su’aalahaas waa haddii aad tahay shaqsi jecel inuu horumar sameeyo. Inaad horumar sameyso kuma timaado hal maalin oo kali ee waxay qaadataa mudo iyo waqti dheer.
“Si aad horumar wanaagsan u sameyni karto waa inaad isweydiisaa su’aalaha ka hor imaani karo noloshaada. Nolosha sideedaba waxay leedahay caqabado waa weyn oo aadan ogaani Karin mar-marka qaar, balse waxay ku xerantahay shaqsiyadaada gaarka ah sidda aad ugu baxsani karto”
Aragti…..-Cabduljabaar Sheekh Axmed
Waxaa jirto siyaasado kuu gaar ah oo aad nolosha u degsatay ama aad doonayso inaad guulo fiican ka gaarto. Inaad nolosha ku guulaysato waa wax iska fudud ee ma ahan wax adag, balse haddii aad adiga adkeyso waxwalbo wey adkaanayaan. Dhammaan caqabadaha nolosha waxaad ugu hor tagi kartaa siyaabooyin badan oo ay ka mid yihiin:
Koow, marka horre noqo qof Illaahay swc ku xeran- maxaa yeelay marwalbo oo aad Illaahay swc ku xeran tahay waxaa kuu suurta geli karo inaad fahanto xaqiiqda nasmiga ah ee aad u nooshahay. Ku xernaanshaha Alle swc ayaa ah guusha ugu wanaagsan uu qofka ka gaari karo adduun iyo aaqiraba. Hadduusan qofka garani Karin sawabaha uu u noolyahay waxay halis ku tahay jiritaanka shaqsiyadeed.
Waa inaad ogtahay cidda adiga ku abuuratay oo aad addoon u tahay. Dhammaanteena waxaan addoon u nahay Illahay swc, laakiin waxaa ceeb weyn ah inaad shaqsi bin’aadam u noqoto addoon, wali adigoo Illaahay ku siiyay caqli iyo garaad wax lagu garto. Waa inaad taqanaa cidda adiga kula damacsan xumaanta iyo cidda kale. Kama wado shaqsiyaadka aad la nooshahay ee waxaan ka wadaa qaabka adduunka maanta la isku gumeysto, sidda inaad ku riyooto inaad tahriibto adigoo dalkaada gudihiisa ka abuurani karo nolol ku farxad geliso.
Waxaa jiro dhalinyaro badan ayaa aad ugu hamiyo inay Yurub ama Amerika tagaan si ay noloshaas wax ugu soo dhadhemiyaan. Ku noolaanshaha dhul shisheeye waxbo kuma soo kordhinayso noloshaada balse waxaa laga yabaa inaad ka soo barato wadaniyada waxay tahay iyo waxa markii horeba ku nacsiiyay wadankaada. Waa sax dadka inta badan ku nool Soomaaliya oo aan waligood aadin qurbaha waxaa la sheegaa inay yihiin dad aan sidaas ugu wanaagsaneen wadaniyada, waxaana keenay ayaa la is orani karaa ma fahansano qiimaha dalka uu leeyahay. Maxaa yeelay qofwalbo waxaa saameeyo halka uu ku nool yahay.
Labo, noqo qof wax aqriyo. Marwalbo oo aad wax aqriso waxaad tahay shaqsi wax faa’ideystay. Waxaa la ogaaday dunidda waxaa ku nool dad badan oo nolosha horumar ka gaaray dadkaas nolosha horumar ka gaaray intooda badan waxay ahayeen dad aqris badan. Maalin walbo waanu riyoonaa balse ma nahay dad riyadooda ka miro dhaliyo? Su’aashaas maalin walbo waxaa isweydiiyo 7bilyan ee adduunka kunool.
Si aad wax badan ugu ogaato wax aqriska waxaad wax ka weydiisaa dadka wax aqriyo, mise adiga dabagal ku sameey sidda ay u fakiraan iyo qaabka ay u yihiin hal abuur. Wax aqriska qofka wuxuu ka dhisaa maskaxda wuxuuna kordhiyaa hal abuurnimada qofka.
Qofka markuu wax badan aqriyo waa qof macluumaad badan ka buuxaan maskaxdiisa, wuxuu wax ka bartay dadkii ugu caqliga badan bulshada soo maray.
Qofka qoraaga ah ha fududeysanin maskaxda ku xeran, maxaa yeelay asiga ayaa markii horre wax aqriska dabeecad ka dhigtay. Aniga Cabduljabaar ahaan 4 sano ka hor ma ahayn qoraa balse qoraa rasmi ah waxaan noqday markii aan noqday qof wax aqris badan markii aan ogaaday inaan bartay macluumaad badan ayaan waxaan ku fakiray macluumaadkaan oo dhan soo dadkaada umma baahno, sidaasna waxaa ku dhashay TukeSomalism.com, hawlaha TukeSomalism ayaa ah hawlaha dhisidda garaadka bulshada. Waxa kali ee bulshada lagu horumarini karo waa in bulshada la baraa aqriska iyo in waxbarashada tahay wax faa’ido badan. Waxaanu ogsoonahay inay jiraan dhalinyaro badan oo waxbarashada dhammaystay hadana shaqo la’aan noqday oo niyadda ka jabay. Iyaga oo kali niyada kama jabin xittaa waxay niyada kasii dilaan jiilka kale ee soo kacaayo oo jecel inay wax bartaan, waxayna u sheegeen inay wax ku heli waayeen waxbarashadii ay barteen. Muhiim ma ahan waxaad baratay inaad wax ku cunto, waxaana kaaga digayaa inaad waxbarasha u barato inaad wax ku cunto ee wax u baro inaad wax ku bedesho waxbarashada.
“Wax u baro inaad wax ku bedesho ee ha u baranin inaad wax ku cunto”
Xigmad maah-maah -Cabduljabaar Sh. Axmed
Maah-maahdaani waxay maskaxdiisa kusoo dhacday aniga Cabduljabaar Sh. Axmed. Waxayna maskaxdeyda kusoo dhacday waqtigii aan aas-aasaayay TukeSomalism.com. Maxaa yeelay dad badan ayaa waxay igula taliyeen inaan iska dhaafo go’aanka TukeSomalism, madamaa wax daqli ah uu iga soo geli doonin waqtigaan la joogo madamaa hadana kaa bixi doono dhaqaallo. Markaas ayaan waxaan is irri dadkaas way saxan yihin balse aniga wey illa qaldanayeen. Sawabta ay igula qaldanayeen ayaaa ahayd waxaan isweydiiyay “asxaabtaada aad u bandhigtay fakirkaan Tukesomalism waxay wada ahayeen dad wax bartay balse ma waxay wax u barteen inay wax ku cunaan mise waxay wax u barteen inay bulshada wax ugu qabtaan?” kadibna waxaan ogaaday inaan ahay shaqsi Soomaaliyeed oo aan masuul ka ahay bulshada aan ka dhashay, waxaana maskaxdeyda kusoo dhacay maah-maahdaan “wax u baro inaad wax ku bedesho ee ha u baranin inaad wax ku cunto”.
Kadibna waxaan ku dhaqaaqay fakirkeyga TukeSomalism.com, maantana wuxuu illaahay swc xukmay inay jiraan bulsho aad wax ugu faa’ideysato TukeSomalism.com dhammaan bulshooyinkaas qaarkiisa waxay ii soo direen fariimo wanaagsan oo ay iigu sii dhiiro gelinayaan inaan hawshaan sii wado.
Waxyaabaha kale oo aan jeclahay inaad horumar weyn ka gaaro ee ku saabsan Tukesomalism.com ayaa ah inaan si wanaagsan oo caalami ah u horumariyo arrinta koorsooyinka, si aan ugu faa’idaysto cimrigeyga iyo guud ahaan wax ka qabashaada dhibaatada haysato bulshadeena Soomaaliyeed. Balse waxwalbo waxaan ugu mahadcelinaynaa Illaahay swc, maxaa yeelay asiga ayaa qeyr iyo sharba keeno. Balse dadaal iyo talo saarashada Alle swc waa muhiim dhab ah.
Seddax, baro koorsooyinka cusub. Inaad wax cusub barato waxay munaafacaad weyn u tahay waa adiga noloshaada iyo dadnimadaada. Waxaa haboon inaad barato wax walbo oo aad isleedahay waxay ku cusub yihiin nafsadaada. Waxaa jiro website-yo badan aad ka barani karto koorsooyinka si uu garaadkaada u dhismo. Waxyaabaha Tukesomalsim.com ay bulshada usoo gudbiso waxaa ka mid ah barashada koorsooyinka.
Haddii aad 10 sano kahor jaamacad ka qalin jabisay wali waxaad u baahan tahay inaad cilmi kororsato. Waxwalbo qofka wuu hilmaami karaa, cilmiga 20 sano ka hor aad barato maanta siddiisa horre ma ahan ee dunidda wey isbedeshay, marwalbo cilmiga wax baa kusoo kordho.
Barashada koorsooyin cusub iyo waxyaabaha aqoontaada kobcinaya waxay kaa caawinaysaa inaad waqtiga ka faa’idaysato siddoo kalle waxaad ka qayb geli kartaa siminaaro iyo kulamo aqooneed si aad wax uga siyaadsato ama aad u noqoto qof saqaafad wanaagsan leh.
Waxaan kusoo gaba-gabaynayaa, jiritaanka shaqsiyadda wanaagsan waxay ka timaadaa inta mar aad korosato cilmiga. Inaad cilmi kororsato waa wax aad u wanaagsan. Waligaa ha joojinin inaad wax kororsato. Shaqada maanta aad hayso haddii aad ka maarmi karto oo aad ugu maarmi karto inaad cilmi kororsato, waxaan ku dhihi lahaa cilmiga raadi. Maxaa yeelay 10 sano wixii aad shaqeynaysay ayaa ka wanaagsan adigoo waxbarashada ka gaaray heerka PhD.
Sawabtoo ah wuxuu qof 10 sano shaqeenayay adiga hal sano ayaad ku heli kartaa. Aqriska waa horumarka ugu weyn ee qofka maskaxdiisa ka dhigi karo qof hal abuur ah ee ku dadaal inaad wax aqrisato hadana aad wax kororsato. Fadlan buugg ayaan aqriyaa wax ha u aqrinin ee adiga ogaaw oo wax ka qor buuggaas aad aqrisay si aad u ogaato munaafacaadka aad ka heshay buuggaas.
Tags: "Wax u baro inaad wax ku bedesho ee ha u baranin inaad wax ku cunto" Xigmad maah-maah -Cabduljabaar Sh. AxmedBaro Koorsooyinka CusubWaxna Aqri |Tukesomalism.com
Next post Beel Mise Khibrad iyo Aqqoon? |Tukesomalism.com
Previous post Qaybtii 9aad: Saaxiibtinimadii Shalay Saakay Halkay Maraysaa? |Tukesomalism.com
September 13, 2017 at 11:00 am	— Reply
aad iyo aad baad u mahadsan tahay
waxaa bedeshay kumanaan soomaali ah maskaxdooda
hore u soco ayaan ku leeyahay ilahay maskaxda hakuu furo oo ha kuu bulaaliyo qalinkaaga alle ha ka dhigo mid kumanan sano oo danbe la intifaacsado
February 12, 2018 at 4:31 pm	— Reply
Mahadsanid wll hadii dadka oo dhan ay sidaada oo kale ufikarayaan soomalidu horumar ayay ku talaabsanlahayd